Juventsus Oo Garaacday Roma | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Juventsus Oo Garaacday Roma
Kooxda difaacanaysa horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa guul raaxoleh ka gaadhay kooxda Udinese, waxayna kuushan ku gaadhay laba gool oo ay u kala dhaliyeen Carlos Tevez iyo Claudio Marchisio halka kooxda Udinese na laga diiday gool muran badan dhaliyay oo lagu sheegay inuu hormasaarto ahaa (offside).
Allegri ayaa ciyaarta ku bilaabay Tevez oo ay dhibaato ka haysata muruqa halka uu Patrice Evra uu wacdaro ka dhigay kulankiisii kowaad ee Juventus.Juventus ayaa dagaal ugu jirta sidi ay markii afraad oo isku xigta ay ugu guulaysan lahayd Scudetti da Serie A da.
Allegri ayaa saddex isbadal ku sameeyay teamkii 1:0 ku garaacay kooxda Chievo wuxuuna weeararka ku bilaabay Fernando Llorente halka uu Evra uu u saftay kulankiisii kowaad waxaa kale oo ku bilawday Roberto Pereyra oo amaah kula jooga Juventus.
Allegri ayay ka maqnaayeen Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini and Arturo Vidal, wuxuuna horyaalka ku bilawday iyadoon Juventus wax dhibaato ah dareemayn. C. Tevez ayaa kooxda Juventus hogaanka u dhiibay daqiiqadii 8 aad ee bilawgii ciyaartaba . qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1:0 ay Juventus ku hogaaminayso ciyaarta.
Qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Juventus halkii ka sii waday qaab ciyaareedkii fiicanaa ee ay ku naaloonaysay. Waxaana markale daqiiqadii 75 aad u suurto gashay inay Juventus hesho goolka kalsoonida waxaana markan goolka Juve qalinka ugu duugay C.Marchisio ciyaarta ayaana noqotay 2:0 ay Juventus ku gacan sarayso.
Markii ay ciyaartu dhamaanaysay ayuu Allegri daqiiqdii 89 aad ee dhamaadka ciyaarta badal ku soo galiyay Alvaro Morata oo xagaagan Real Madrid ka soo wareegay. Ciyaarta ayaana ku soo idlaatay 2:0 ay Juventus saddexda dhibcood ku qaadatay.
Dhinaca kale kooxda Roma oo marti u ahayd kooxda Empoli ayaa guul nasiib ah ka gaadhay kadib markii Radja Naingola uu kubada ku laaday goolka Empoli ayuu L. Sepe si qalad ah kubbadaa iskaga dhaliyay. Roma ayaana goolkaas guushu ku raacday.
Roma ayaa labadkii kulan ee horyaalka Talyaaniga ugu horeeyay ayaa labada kulanba badisay waxayna leedahay 6 dhibcood waxayna isku dhibco yihiin Juventus oo hogaanka u qabatay horyaalka Seria A iyadoo dhinaca goolasha kaga horaysa Roma.Labdan kulan oo kaliya ayaa Shalay oo sabti ah laga ciyaaray horyaalka Talyaaniga.